Online Burma Library > Main Library > Society and Culture > Burmese social and political culture > Burmese political culture - books from the 1950s and '60s (most published by AFPFL)
Home > Main Library > Society and Culture > Burmese social and political culture > Burmese political culture - books from the 1950s and '60s (most published by AFPFL)
Burmese political culture - books from the 1950s and '60s (most published by AFPFL)
Title: "Criticism of the paper on an advisory board for internal unity" "ပြည်တွင်း ညီညွတ်ရေး အကြံပေးအဖွဲ့ စာတန်းအပေါ် ဝေဖန်ချက်"
Date of publication: 01 October 1969
Author/creator: Thein Pay Myint သိန်းဖေမြင့်
Source/publisher: Thein Pay Myint သိန်းဖေမြင့်
Format/size: pdf (3.67MB)
Title: "Mao Ze Dong’s China and the Sovereignty of Myanmar" "မော်စီတုန်းတရုတ်နှင့် မြန်မာ့ အချုပ်အချာအာဏာ"
Date of publication: 01 August 1967
Description/subject: A collection of articles in "Bo Ta Taung" newspaper about the relationship between Burma and China in 1967. This book isa...... သိန်းဖေမြင့် သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်က ဗိုလ်တထောင် သတင်းစာတွင် တရုတ်မြန်မာ ဆက်ဆံရေး အကြောင်း အခန်းဆက် ဆောင်းပါးများရေးခဲ့ပြီး၊ ဤစာအုပ် တွင် စုစည်း ထုတ် ဝေလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Source/publisher: "Bo Ta Taung"
Title: "Communism and we Burmans" "ဘုံဝါဒနှင့် ဒို့ဗမာ
Date of publication: 25 January 1967
Description/subject: First Edition 1954: Second Edition 1964: Third Edition 1967, ... Articles by: 1. Thakhin Ko Daw Hmai, 2. Thakhin Aung San, 3. U Nu, 4. Thakhin Soe, 5. Thakhin Than Tun, 6. Thakhin Ba Hein, 7. Thakhin Hla Pay (Bo Lat Yar), 8. Thakhin Kyaw Sein, 9. Thein Pay Myint, 10. U Ba Swe, 11. Thakhin Lay Maung, 12. U Thant (United Nations)..... ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေခြင်း ၁၉၅၄၊ ဒုတိယ အကြိမ် ထုတ်ဝေခြင်း ၁၉၆၄၊ ယခုတကြိမ် သည် တတိယ အကြိမ် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။... စာရေးဆရာ ပေါင်းစုံပါဝင်သည်။ ၁. သခင်ကိုယ်တော် မှိုင်း ၂. သခင်အောင်ဆန်း ၃. ဦးနု ၄. သခင်စိုး ၅. သခင်သန်းထွန်း ၆. သခင်ဗဟိန်း ၇. သခင် လှဖေ(ဗိုလ်လက်ယာ) ၈. သခင် ကျော်စိန် ၉. သိန်းဖေမြင့် ၁၀. ဦးဘဆွေ တို့ဖြစ်သည်။
Format/size: pdf (13.92MB)
Alternate URLs: http://www.burmalibrary.org/docs14/Book20-split.pdf
Title: "On The People's Democratic Dictatorship" “ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ အာဏာရှင်စနစ်”
Description/subject: Translated into Burmese by Lwin Maung in 1966. Chinese original, 1949... Ka Laung Pyan Publishing House, Rangoon, Burma... ထုတ်ဝေသူ ၏ အမှာ ဤ “ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ အာဏာရှင်စနစ်” ဟူသော စာတမ်းကို တရုပ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (၂၈) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် အတွက် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ တွင် ရဲဘော် မော်စီတုံး ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Author/creator: Mao Zedong
Format/size: pdf (2.02MB)
Title: "The Path of the AFPFL" "ဖဆပလ ၏ ခြေလှမ်း"
Date of publication: 01 September 1963
Source/publisher: Lanzin Newspaper လမ်းစဉ် သတင်းစာ
Title: "Thein Pay Myint -athreat to peace" "ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သိန်းဖေမြင့် အန္တရာယ်"
Date of publication: 15 August 1963
Description/subject: ဤစာအုပ်တွင်- ငြိမ်းချမ်းရေး အဖျက်သမား သိန်းဖေမြင့် အလိုမရှိ... ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် သိန်းဖေမြင့်... နိုင်ငံရေး မျက်လှည့်ဆရာကြီး သိန်းဖေမြင့်... ပြည်သူ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ ပေါင်းစုံ နှင့် သိန်းဖေမြင့်... သိန်းဖေမြင့် ၏ နိုင်ငံတကာ့ရေးရာ အမြင်များ။ (လမ်းစဉ် အယ်ဒီတာ အဖွဲ့မှ ပြုစုသည်)
Source/publisher: "Lanzin Newspaper" လမ်းစဉ်သတင်းစာ
Format/size: pdf (7.69MB)
Title: "Domestic Peace and Dialogue Movement" "ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အရေးတော်ပုံ"
Description/subject: Peace in Burma movement lead by Thakhin Ko Daw Hmaing: ... သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု အကြောင်း တင်ပြသည့် စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းစဉ် အယ်ဒီတာ အဖွဲ့မှ ပြုစု တင်ပြပါသည်။
Source/publisher: "Lanzin Newspaper" လမ်းစဉ် သတင်းစာ
Format/size: pdf (4.93MB)
Title: "The Advanced Socialism" "တိုးတက်သော ဆိုရှယ်လစ်စနစ်"
Description/subject: ပထစ ခေါင်းဆောင် သခင်တင်ရေးသားသည်။
Author/creator: Thakhin Tin (A leader of the Union Party)
Source/publisher: Thakhin Tin
Format/size: pdf (7.51MB)
Title: "The Burma Workers Party's view on the BSPP" ဗမာပြည် အလုပ်သမားပါတီ ၏ မဆလ ပါတီအပေါ် သဘောထား
Date of publication: 09 August 1962
Description/subject: The Burma Workers Party's view on the BSPP (Wi Du Ya Tha Khin Chit Maung and journalists: Press Release.) ဗမာပြည်အလုပ်သမား ပါတီ၏ မဆလ ပါတီ အပေါ် သဘောထား (၀ိဓုရ- သခင်ချစ်မောင် နှင့် သတင်းစာ ဆရာများ အမေး အဖြေ... တိုင်းရေးပြည်ရေး အဖြစ်စုံ တင်ပြချက်များ)
Author/creator: Vi Dhu Ra Tha-khin Chit Maung
Source/publisher: Burma Workers Party Headquarters
Format/size: pdf (2.18MB)
Title: "Collected speeches and his opinion on internal peace by Brigadier General Kyaw Zaw"
Date of publication: 01 December 1960
Description/subject: First edition- November 1957: Second edition - December 1960: "ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး သဘောထားနှင့် လက်ရွေးစဉ် မိန့်ခွန်းများ" ပထမအကြိမ်ပုံနှိပ်ခြင်း- နိုဝင်ဘာလ ၁၉၅၇၊ ဒုတိယအကြိမ်ပုံနှိပ်ခြင်း- ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၆၀။
Author/creator: Brigadier General Kyaw Zaw
Source/publisher: Brigadier General Kyaw Zaw
Format/size: pdf (4.42MB)
Title: "AFPFL’s view on recognizing Buddhism as the State Religion"
Date of publication: 18 December 1959
Description/subject: Publication of Man Dai Newspaper(14-12-59) "ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ အဖြစ်သတ်မှတ်ရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ ဖ.ဆ.ပ.လ အဖွဲ့ချုပ်၏သဘောထား" (၁၄-၁၂-၅၉) နေ့ အထူးထုတ် မဏ္ဍိုင် သတင်းစာကို၊ သံဃာ့ တပ်ဦး အဖွဲ့မှ တဆင့် ကူးယူ ရိုက်နှိပ် ဝေငှသည်။
Title: Seminar to evaluate the AFPFL's Programme ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ
Date of publication: 24 October 1959
Description/subject: "Seminar to evaluate the AFPFL's Programme" (24 October 1959 ) ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ (၁၉၅၉-ခု အောက်တိုဘာလ ၂၄- ရက်) တွင် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ် ၀ါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်သဘောထား လူမှုရေး အခဏ် ကို ပညာရေးနှင့် ပြည်ထောင်စု ယဉ်ကျေးမှု ကဏ္ဍ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်၊ အလုပ်အမှုဆောင် ဦးထွန်းတင် ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။
Source/publisher: Education and Culture Section (AFPFL)
Format/size: pdf (2.07MB)
Title: Step by Step Struggle Against Oppression ဖိနှိပ်မှု တိုက်ပွဲ အဆင့်ဆင့်
Date of publication: September 1959
Description/subject: First edition: July 1959 ... Second edition: August 1959 ... 1. Freedom of religion... 2. Freedom of expression ... 3. Freedom of organizing ...4. justice ... 5. Freedom of working and living... 6. Right to freedom through independence ... 7. Independence of Ireland ... 8. The American Revolution ... 9. The French Revolution ... 10. Italian solidarity... 11. Independence of Mexico ... 12. The hero of South American freedom ... 13. Independence of Philippines... 14. Various struggles... 15. Non-violence of the people of Korea... 16. Freedom and intelligence....... သန့်ရှင်း ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးနု ရေးသည်... ပထမ နှိပ်ခြင်း (၁၉၅၉ ဇူလိုင်)... ဒုတိယ နှိပ်ခြင်း (၁၉၅၉ သြဂုတ်)... ၁. လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်... ၂. လွတ်လပ်စွာရေးသားဟောပြောခွင့်... ၃. လွတ်လပ်စွာ စည်းဝေးခွင့်နှင့် စည်းရုံးခွင့်... ၄. လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ခွင့်... ၅. လွတ်လပ်စွာသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းနိုင်ပုံ... ၆. လွတ်လပ်ခွင့်မှ လွတ်လပ်ရေးသို့... ၇. အိုင်ယာလန်လွတ်လပ်ရေး... ၈. အမေရိကန်တော်လှန်ရေး... ၉. ပြင်သစ်အရေးတော်ပုံ... ၁၀. အီတလီပြည်စည်းလုံးရေး... ၁၁. မက္ကဆီကိုလွတ်လပ်ရေး... ၁၂. တောင်အမေရိကလွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်း... ၁၃. ဖိလစ်ပိုင် လွတ်လပ်ရေး... ၁၄. တိုက်ပွဲအမျိုးမျိုး... ၁၅. ကိုရီးယားပြည်သူတို့၏ အနုနည်း... ၁၆. လွတ်လပ်ရေးနှင့် နှလုံးရည်
Author/creator: U Nu
Source/publisher: Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL-Clean)
Format/size: pdf (5.00MB)
Title: "Where is Parliamentary Democracy going?" "ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဘယ်လဲ"
Description/subject: This isacriticism by Member of Parliament Tha Khin Chit Maung (Thar Yar Waddy) of Prime Minister General Ne Win's speech to Parliament on 16 February, 1959. ဤစာအုပ်သည် ပါလီမန်အမတ် သခင်ချစ်မောင် (သာယာဝတီ) က ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်း ၁၉၅၉၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၆ တွင် ပါလီမန် သို့ ပြောသည့်မိန့်ခွန်းကို ဝေဖန် ချက်ဖြစ်သည်။
Author/creator: Wi Du Ya Thakhin Chit Maung ၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင်
Source/publisher: Burma Labour Party (Rangoon District)
Title: "Where is Social-Ni (Red-Social) going?" ဆိုရှယ်နီဘယ်လဲ?
Date of publication: August 1958
Description/subject: Criticism on The Burma Workers Party. ..... အလုပ်သမားပါတီအားဝေဖန်ချက်။
Source/publisher: The comrades who want the Real Peace
Title: "Interim Organizing Programme of the AFPFL (Clean)" ဖဆပလ(သန့်ရှင်း) အဖွဲ့ စည်းရုံးရေး ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
Date of publication: 07 July 1958
Description/subject: The AFPLF had split into2factions. The faction which published this paper called itself the "clean" AFPFL. It had to organise itself quickly because the other faction, the "stable" AFPFL, had already begun... ဗ.တ.လ.စ ပုံနှိပ်တိုက်၊ အမှတ် ၄ ၀င်္ကဘာလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့
Source/publisher: AFPFL (Clean)
Title: Criticism of Chan Aye's Critical review ချမ်း အေးစစ်တမ်း ဝေဖန်ချက်
Date of publication: 01 August 1957
Source/publisher: Burma Workers and Peasants Party
Title: Report of the Burma Workers' and Peasants' Party Central Committee
Date of publication: 01 February 1957
Description/subject: The report was presented in "Countrywide Conference of Burma Workers' and Peasants' Party" hold in5-7September 1956) ဗမာပြည်အလုပ်သမား လယ်သမားပါတီ ဆဌမ အကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီ အစီရင်ခံစာ" ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပါတီ ကွန်ဖရင့် တွင် တင်သွင်းသည်။ (၁၉၅၆၊ စက်တင်ဘာ ၅ - ၇)
Source/publisher: Burma Workers' and Peasants' Party
Format/size: pdf (7.24MB)
Title: People’s Democracy Party - Burma (formerly Dobama Asiayone) ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီပါတီ (ဗမာပြည်)
Date of publication: 20 November 1956
Description/subject: The history and constitution of the People’s Democracy Party (Burma) which changed from Dobama Asiayone (Our Burman Association). ယခုစာတမ်းသည် ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီပါတီ (ဗမာပြည်) ၏ သမိုင်း နှင့် ဖွဲ့ စည်းပုံ ဖြစ် ပြီး ၄င်းပါတီသည် ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးမှ အသွင်ပြောင်းလာသည့် ပါတီဖြစ်သည်။
Source/publisher: People’s Democracy Party (Burma)
Format/size: pdf (2.90MB)
Title: "Various Affairs in Politics (First Volume)" "နိုင်ငံရေးရာ အဖြာဖြာ"
Date of publication: 09 October 1946
Description/subject: 33 articles by U Ba Pay out of 98 in "Han Thar Waddy" newspaper from 23 April 1946... ဟံသာဝတီ သတင်းစာ ပါ ဆောင်းပါး ၃၃ စောင် ကို စုစည်းချက် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေချိန်အထိ ဟံသာဝတီ သတင်းစာတွင် ဆောင်းပါး ၉၈ စောင် ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆောင်းပါးများကို ဦးဘဖေ ရေးသားပြီး ပထမဆုံး ဆောင်းပါးကို ၁၉၄၆ ခု၊ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖေါ်ပြပါသည်။
Author/creator: U Ba Pay (The Great Leader)
Source/publisher: "Han Thar Waddy" newspapaper
Title: The Monk and the Vote ဘုန်းကြီးနှင့်မဲ
Description/subject: Presentation of the book is Monks should be right to Vote or not in election. ဤစာအုပ်တွင် ဘုန်းကြီးများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသင့် မရှိသင့် ကို တင်ပြထားသည်။
Author/creator: U Tint Shwe (Patama Jaw, Parli Mahar Wizar)
Title: "THE NEW BURMA IN THE NEW WORLD"
Description/subject: Manifesto of the Anti Fascist People's Freedom League (Burma Patriotic Front)... Towards better mutual understanding and greater co-operation between the British and the Peoples of Burma... Radio Address by Colonel Naywin (7-5-45) to the People of Burma... Anti-Fascist People's Freedom League Statement... Queries and replies at the press interview given by Anti-Fascist People's Freedom League on 14th May 1945 ... Programme of "National reconstruction through National service"... Policy and immediate Programme of the Anti- Fascist People's Freedom League (Burma Patriotic Front)... Provisional Rules for Supreme Council of Anti-Fascist People's Freedom League... Leaders Conference ... Letter to the Governor ... Resolutions passed at the Meeting of the Supreme Council of The Anti-Fascist People's Freedom League which was held in Session on the 6th, 7th and 8th October 1945... Statement of the Supreme Council of Anti- Fascist People's Freedom League on His Excellency tho Governor's speech on 17fn October 1945 Instrument of Instructions. ... Statement issued on 28th October 1945 by Anti-Fascist People's Freedom League ... The League's Rejonder... List of the nominees of the Anti-Fascist People's Freedom League... Shwedagon Mass Meeting. Governor's Executive Council ... Gist of Major-General Aung San's Speech... THE FOLLOWING DOCUMENT IS MISSING: The report of Thakin Than Tun, General Secretary, AFPFL made at the mass meeting held at the Shwedagon Pagoda on the 18th November 1945
Source/publisher: Anti Fascist People's Freedom League (AFPFL)
Format/size: pdf (2.6MB-OBL version; 7.07MB-original)
Alternate URLs: http://www.burmalibrary.org/docs13/Book19(en).pdf
Title: "2/90" ၂/၉၀
Description/subject: Publisher of this book is U Phone Swe (General Secretary), Democratic Party for New Society... (Published in 1990?)... ၂/၉၀ စာအုပ်ကို ဦးဖုန်းဆွေ (အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး) လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ထုတ်ဝေသည်။
Source/publisher: Democratic Party for New Society
Format/size: pdf (5.61MB)
Date of entry/update: 05 August 2012
Title: "Manifesto of the Communist Party" ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကျေညာစာတမ်း (၁)
Description/subject: The title in Burmese translation is "Manifesto of the Communist Party (1)"... Translated to Burmese from the version "Translated: Samuel Moore in cooperation with Frederick Engels, 1888;" by Maung Maung Tin (No publication date in Burmese translation). Written: Late 1847; First Published: February 1848; Source: Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp. 98-137; Proofed: and corrected against 1888 English Edition by Andy Blunden 2004; ... မြန်မာဘာသာပြန် ၏ ခေါင်းစဉ်မှာ "ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကျေညာစာတမ်း (၁)" ဖြစ်ပါသည်... ထုတ်ဝေသူ၏ မှတ်ချက်တွင် (၁၈၄၈ ခုနှစ် မူလ ဂျာမန်ဘာသာ စာမူမှ ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် ဆမ်မြူရယ်မိုးက အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ဆို၍၊ ဖရက်ဒရစ် အိန်ဂျယ်စ်က တည်းဖြတ်ထားသည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ- "ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကျေညာစာတမ်း" ကို မြန်မာ ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခု စာမူတွင် ၁၈၈၈ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ရိုက်စာအုပ်နှင့် ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ် ဂျာမန်ဘာသာ ရိုက် စာအုပ်တို့ အတွက် အိန်ဂျယ်စ်၏ မှတ်ချက်များနှင့် ဘာသာ အမျိုးမျိုး ဖြင့် ရိုက်သော ကျေညာစာတမ်း စာအုပ်များ၏ နိဒါန်းများ အားလုံးလည်း ပါဝင်ပေသည်။) ဟု ပါရှိသည်။
Author/creator: Karl Marx and Frederick Engels
Format/size: pdf (8.12MB)
Alternate URLs: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm
Title: Guidelines for organisers on the rules and programme of the Union League
Description/subject: No publication date. This book was probably published in 1959 or 1960, (Page 6, paragraph 16). "ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ ချုပ်- စည်းရုံးရေး မှူးများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက် နှင့် စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းစဉ်- ညွှန်ကြားချက်" ... ဗ.တ.လ.စ ပုံနှိပ်တိုက် အမှတ် ၃၉၇ ပြည်လမ်း ၊ ရန်ကုန်။ ...
Source/publisher: Union League
Format/size: pdf (1.02MB)
Title: Karl Marxism ကားလ်မတ်စ် ၀ါဒ
Description/subject: Probably published in 1941(not sure): Recognized by the Nagani (Red Dragon) book club and the Nagani (Red Dragon) printing house. (The title in the cover of this book used "Karl Marx", but the title in first page is "Karl Marxism" and the book explain about Marxism ..... မျက်နှာဖုံး မှ စာအုပ် အမည် "ကားလ်မတ်စ်" ဖြစ်ပြီး၊ ပထမစာမျက်နှာမှ စာအုပ်အမည်မှာ "ကားလ်မတ်စ် ၀ါဒ" ဖြစ်သည်။ မာ့က်စ် ၀ါဒအကြောင်းရှင်းပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။)
Author/creator: Thakhin Bo သခင်ဗို
Source/publisher: Na Gar Ni
Format/size: pdf (8.17MB)
Title: Standard rules for registered trade unions
Description/subject: No publication date. The Burma Trade Union Congress wasacentral trade union organization in Burma, founded in 1950 as the trade union wing of the Burma Workers and Peasants Party (Wikipedia).
Source/publisher: The Trade Union Congress (Burma)
Format/size: pdf (1.12MB)